Isiteyitimenti eNtsha saseJersey-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNdawo kunye nabaGqibeli beRhafu
Isimo esitsha saseJersey
ikhaya / Blog / Isimo esitsha saseJersey
NJSA 45: 6-10.8. Ukunyanzeliswa kweemfuno
I-45: 6-10.8. Ukunyanzeliswa kweemfuno
8. Namphi na umntu osileleyo ekugqibezeni iimfuno zemfundo eziqhubeka zamazinyo ezisekwe ngokuhambelana necandelo 1 yeli senzo uya kuba noxanduva lokufumana isohlwayo esingaphaya kwe- $ 500 okanye eyongezelelweyo ...
NJSA 45: 6-10.9. Iintlawulo ezahlukileyo zemibutho yamazinyo
I-45: 6-10.9. Iintlawulo ezahlukileyo zemibutho yamazinyo
9. Ibhodi iya kuvumela nayiphi na imibutho yabasebenzi yamazinyo enikezela inkqubo yemfundo eqhubekayo evunywe yibhodi ngokulandela icandelo 2 yesi senzo ukumisela umahluko ofanelekileyo ...
I-NJSA 45: I-6-10.10 iinkcazelo ezinxulumene nokuqhubeka nemfundo yamazinyo.
I-45: I-6-10.10 iinkcazelo ezinxulumene nokuqhubeka nemfundo yamazinyo.
1. Ngeenjongo ze-PL1991, C. 490 (45: 6-10.1 Iyaqhubeka nemfundo yamazinyo efunekayo. Et seq.) Kunye nesi senzo silungiso kunye ne-2009: "Kuyaqhubeka ...
NJSA 45: 6-11. Iilayisensi zokuhambisa amagama abasebenzi okanye abancedisi eofisini; ukubonakaliswa kwesatifikethi; ukuvavanywa kweeofisi, njl.
I-45: 6-11. Iilayisensi zokuhambisa amagama abasebenzi okanye abancedisi eofisini; ukubonakaliswa kwesatifikethi; ukuvavanywa kweeofisi, njl.
Wonke umntu owenza ugqirha wamazinyo kweli lizwe uya kuthi, kwimfuno ebhaliweyo eyenziwe ...
NJSA 45: 6-12. Ukuqhelisela ubugqirha bamazinyo yimibutho evaliweyo; ukuziqhelanisa phantsi kwegama elomeleleyo
I-45: 6-12. Ukuqhelisela ubugqirha bamazinyo yimibutho evaliweyo; ukuziqhelanisa phantsi kwegama elomeleleyo
Akukho ntlangano iyakuziqhelanisa okanye iqhubeke nokuziqhelanisa, ukubonelela okanye ukwenza isenzo sokuziqhelanisa, okanye ukuzibandakanya njengokwenza amazinyo. Akukho mntu ...
NJSA 45: 6-13. Isohlwayo sokuziqhelanisa ngaphandle kwelayisensi
I-45: 6-13. Isohlwayo sokuziqhelanisa ngaphandle kwelayisensi
Akukho mntu uyakuqhuba ugqirha wamazinyo ngaphakathi kwentsingiselo yesi sahluko ngaphandle kokuba unemvume yokwenza oko, kwaye akukho mntu uyakuthathwa enelayisensi ngaphandle kokuba unelayisensi ngoku kwaye ubhalisiwe ukuze enze okanye ...
NJSA 45: 6-14. Ukwakhiwa kwesahluko njengabantu abangabhaliswanga nangabagqirha
I-45: 6-14. Ukwakhiwa kwesahluko njengabantu abangabhaliswanga nangabagqirha
Esi sahluko asisayi kuthathwa njengesiya kuthintela umntu ongengobhaliso ekwenzeni umsebenzi we-inert jambo kwi-ofisi yamazinyo okanye elebhu; nokuba ...